About us - Keen Education Center
“Keen Education Centre” isaSingapore-registered company, established by the Company registered No. 53311414D on 22/07/2015:atop Education Centre trusted by Myanmar nationals in Singapore, which provides quality Programmes and reliable related Services for S-Pass holders, Work-Permit and Myanmar Domestic Helpers.
We specialize in providing different levels of Language Proficiency Courses for both Chinese and English, Accounting courses and IT Courses to our students whereby lessons are conducted in small classes and inawarm, nurturing environment located at 111 North Bridge Road, Peninsular Plaza #05-21A, Singapore 179098.
We are encouraged by the positive response on the Programmes and Services that we offer from our existing Myanmar students who are studying/working in Singapore.
I. Courses we offer in Singapore and Myanmar.
Personal Development Courses for the Myanmar Professionals working in Singapore.
Essential Language Proficiency Courses and IT courses for Myanmar S-Pass Holders, Work-Permit Holders and Domestic Helpers in Singapore.
Different types of Language proficiency courses and Personal Development Courses for employees of local companies in Myanmar.
Language Proficiency Courses (both English and Chinese) for Military personnel in Myanmar
II. Business networking programme for entrepreneurs.
Arrange short-term visit Networking Meetings in Singapore for both Myanmar and Singaporean entrepreneurs to seek opportunities for business expansion.
Exchange knowledge programme in overseas for business expansion purpose.
Enhance individual through Learning.
To beaLeading Enrichment Course Service Provider in Singapore and Myanmar.
Professionalism, Dedication, Responsibility and Integrity.
မျှော် လင့် ရာပန်းတိုင် တစ်ခု အတွက် မိမိ ဘဝရပ်တည်မှု တိုးတက် ရာ အထောက်အကူပြု ပညာရပ် ကိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။Keen Education Center မှ ဆရာ/မ များ၏ ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင် စွာသင် ကြားမူ့၊ စေတနာ၊ အချိန် ညှိနှိုင်းပေးမူ့၊ သန့် ရှင်း သပ်ယပ် သော စာသင်ခန်း တို့ ကြောင့် ကျေနပ် အားရ မိ ပါတယ် ။ အမှန် တကယ် တတ် မြောက် ရန်နှင့် ပျော်ရွှင် စွာသင်ယူနိုင် ဖို့ သူငယ်ချင်း များကိုလည်း နွေး ထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
နမ့်စမ်းစမ်းစိုး (Advanced Excel Class)
သင်တန်း စတက် တက်ချင်း ကွန်ပျူတာ ဆိုတာ ဘာမှ မသိခဲ့ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာ အခြေခံသင်တန်းက (၃) လ မှာ တော်တော်များများကို သိခဲ့ရပါတယ်။ (၃) လတက်ပြီးလို့ ဆက်လက်သင်ယူချင်သေးတဲ့ အတွက် အဆင့် (၂) သင်တန်းကို ဆက်တက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာ စာကြိုးစား ပြီး အဆက်မပြတ် လေ့လာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါ LCCI( Level 1&2) ကို ဆက်တက်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ကို ရှာဖွေရန် လိုအပ် သော အခွင့်အရေးကို ဒီ Keen Education Center မှာ စတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်စာနဲ့စကား ကို အရင်ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာစတင်လေ့လာခဲ့ပေမဲ့ တစ်ချို့ အသံတွေ မမှန်ခဲ့တာကို ဒီသင်တန်းရောက်မှ သိရှိ ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ Keen Education Center ရဲ့ အားပေမှု ကြောင့် HSK  Level3ကို ၀င်ဖြေဖြစ်ခဲ့ပြီး Reading  94, Writing   64, Listening 93, Speaking 68 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Chinese level (5) ကို ဆက်လက်သင်ယူနေပြီး ကျွန်မရဲ့ တရုတ်စာ အရည်အသွေး ကို ထပ်မြှင့်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။
Superlink Holding Pte Ltd
ဘာသာစကားနဲ့ ပက်သက်လို့ လေ့လာစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ကိုယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ ပြောဆို နိုင်ဖို့ရည်ရွယ် ပြီး Basic Chinese မှစတင်ပြီး ဆက်တိုက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်…။ Keen Education Centre မှ  ခေတ်မီကောင်းမွန်တဲ့ သင်ရိုး နဲ့ လမ်းညွှန်မှုတို့ကြောင့် တရုတ် ဘာသာစကားကိုလေ့လာရာမှာ များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံအသံထွက်များ အပြင် စကားပြောလေးတွေ သီချင်းလေးတွေ နဲ့တခြား သင်ခန်းစာ တို့ကို ဥပမာ ပေးပြီး သင်ပေးခဲ့လို့  အခု ချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် (Self Study) ဖြင့် လေ့လာနိုင်လောက်အောင် အချိန်တိုတွင်းတိုးတက်မှု အများကြီးရ ရှိ နိုင်ခဲ့ သောကြောင့်  အထူးပဲ ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။
Santarli Construction Pte.Ltd
Singapore မှာ တရုတ်ဘာသာစကားတတ်ရင်အခွင့်အလမ်းပိုများတာ ကြောင့်အခြေခံမှစ ပြီး လေ့လာရန်ရည်ရွယ် ခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာဖြင့် Keen Education Centre မှာ စနစ်တကျ သင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအခု Chinese Level4ကို တက်နေပါတယ်။ စာသင်ရုံသာမက Self Study လုပ် နိုင်အောင် လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သောကြောင့် အချိန်တို အတွင်းမှာ ကုိုယ်တိုင် ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် ပြောနိုင် ပြီ ဖြစ်လို့ရုံးမှ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များက ပင် ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သင်တန်းမတက်ဘဲ Self study လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာမ မှပြောသော်လည်း အမြဲလန်းဆန်း တက်ကြွနေသောပတ်ဝန်းကျင် မှ ဗဟုသုတ၊ပညာများ ဆက်လက် ဆည်းပူးပြီး ကံကောင်းခြင်းကို လက်လွတ်မခံနိုင် သောကြောင့် သင်တန်း ကို ဆက်တက်သွားပြီး HSK Level4(Intermediate Level) ကို ဖြေဘို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
Fabulous Curtain Pte Ltd.
စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကိုယ့်အတွက် တိုးတက်မှု အတတ်ပညာ တစ်ခုခု ရချင်တာ ရယ် ဝါသနာပါတာရယ် ကြောင့် တရုတ်စာကို လေ့လာ ဖြစ်ပါတယ်။  Keen Education Centre ရဲ့ တရုတ်စာ Level2သင်တန်း မှာ တက် ရောက် လေ့လာနေပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ယပ်တဲ့ နေရာ၊ ခေတ်မီသော စာအုပ်များ နဲ့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော ညွှန်ပြမှု ကြောင့်  အသံထွက်များ   တိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ တရုတ်ဘာသာ ကို ယုံကြည်မှုရှိစွာ အသုံးချ နိုင်နေပါပြီ။
Secretary (Safety Department)
သင်ယူခြင်းက လွယ်ကူပြီး တတ်မြောက်ဖို့ကတော့ အားစိုက်ထုတ်မှုတခုတည်းနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ အားစိုက်ထုတ်မှုတွေနဲ့အတူ စနစ်ကျသော သင်  ကြားခြင်းအပြင်အချိန်ညှိယူမှု၊ နွေးထွေးမှုစေတနာ၊ သပ်ရပ် သန့်ရှင်းသော စာသင်ခန်း တို့ဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာ တတ်မြောက်နိုင်စေဖို့ “Keen Education center” သို့ အတူတကွ လေ့လာသင်ယူကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
Nant Hay Py Nway Oo
(Basic Computer Class)
ကွန်ပျူတာအခြေခံရှိထားတဲ့ အတွက် စတက် တက်ချင်း ကွန်ပျူတာ အဆင့် (၂) ကို ၀င်တက်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားပေးမှုအပိုင်းမှာ အလွန်ကောင်းမွန်လို့ အဆင့် (၂) ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် LCCI Level (1 & 2) ကို ဆက်လက်သင်ကြားနေပြီး မိမိ ဘ၀ကို တိုးတက်ဖို့ ဒီ Keen Education Center မှ နေပြီး စာမေးပွဲတွေ ၀င်ဖြေရင်း ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာပါ။
GCE O’ Level စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်း
捞鱼生 (lāo yú sheng)
Copyright © 2016 Keen Education Centre. All Rights Reserved.